agile bvunzo chirongwa - isu tinonyatsoda imwe?
Kuru Agile Agile Bvunzo Chirongwa - Isu Tinonyatsoda Imwe?
Isu tinoda iyo Agile Bvunzo Yekuronga Gwaro?
Kuronga Bvunzo chiitiko chakakosha cheyedzo yekuyedza uye iyo inoda pfungwa dzakangwarira uye sarudzo kubva kwete kungoita maneja wekuyedza (uyo anowanzo kuve nebasa rekugadzira chirongwa chekuyedza) asi nhengo dzese dzeboka rekuyedza uye maneja wekuvandudza zvigadzirwa.
Vamwe vanhu vanotenda kuti ndicho chikamu chakakosha kwazvo pakuyedza (Ini pachezvangu ndinofunga bvunzo dhizaini uye kufunga kwekufungidzira ndiko kwakanyanya kukosha) uye kushandisa maawa mazhinji nesimba kuita chirongwa chakakura chekuyedza.
Mabhuku ezvinyorwa anoisa chikamu chakazara chine chekuita nekuronga bvunzo, maitiro ekunyora chimwe uye zvekuisa muchirongwa chekuyedza apo mamwe masangano anotonga nemasangano anotonga akadai seDFA anoda chirongwa chakazara chebvunzo kuitira kubvumidza chigadzirwa.
Munyika chaiye, munzvimbo ine mapopoma, kazhinji gwaro rekuyedza nderimwe risingatombo tariswe panguva yehupenyu hwechigadzirwa. Izvo zviitiko zve 'Bvunzo Kuronga uye Kuongorora' chinofanirwa kuve chiitiko chiri kuenderera panguva yeprojekti hupenyu-kutenderera, inofanirwa kuvandudzwa sekushandurwa kweprojekiti, asi kazhinji izvi hazvisizvo; chirongwa chekuyedza hachivandudzwe kana shanduko dziri kutarisisa, zvichiita kuti chirongwa chebvunzo chive chisina kukosha neichi chigadzirwa.
Ipo kuronga kwekuyedza kunowanzo kuve kunofungidzirwa seinofanirwa-kuve nechigadzirwa muchirongwa chemvura, tinonyatsoda chirongwa chekuyedza cheiyo agile chirongwa? i.e. inowedzera here chero kukosha kune izvo timu yese iri kuyedza kuwana?
Iyo Agile manifesto yakajeka inofarira kushanda software pamusoro pezvakakwana zvinyorwa uye kupindura shanduko pamusoro pekutevera chirongwa.
Munharaunda yakaoma, zvirimo mukuburitsa (izvo zvinhu) zvinokurukurwa pamberi pekumhanya kuitira kuti timu yekuyedza izive zvisati zvaitika chiyero uye chii chinofanirwa kuyedzwa.
Mu 'kuronga mutambo we poker' fungidziro dzinokurukurwa kuburikidza kuitira kuti timu yekuyedza izive kuti zvichatora nguva yakareba sei kuyedza chimiro (izvi zvinosanganisa magadzirirwo enharaunda, zviitiko, otomatiki, kuongorora, kuita, nezvimwewo).
Mu 'chikamu chekunyora nyaya' uko ruzivo rwechinhu chimwe nechimwe chiri kufungidzirwa kuburikidza, timu yekuyedza yatotanga kunyora zviitiko zvekuvhara nzira dzakawanda dzenyaya dzinogona kuyedzwa - ichi ndicho chiitiko chakakosha kwazvo chechikwata.
Munguva yekumhanya, QA iri kuenderera kuyedza kodhi nyowani / chimiro. Kuronga bvunzo kunova chiitiko chine simba sekukosha kwezuva rekuchinja. Kuedzwa kunoenderana nezve chii chiri chiitiko chezuva uye mhedzisiro yezuro zuva.
Zviri pachena kuti chirongwa chekuyedza hachiratidze hurema asi zviitiko zvekuyedza zvichaita. Iko kuedza kunofanirwa kuchinjiswa mukugadzira zvirinani zviitiko pane kugadzira chirongwa chekuyedza.
Chiri kunyatsodiwa ipfupi agile test bvunzo gwaro rinotsanangura maitiro anoshanda pane mamwe mabara , kureva zvikamu zveSprint Kuronga, Magadzirirwo Emashopu, Manual QA, Mashandisiro
Saka, uine zvese izvi mupfungwa, iro Gwaro Rokuyedza gwaro kana rakakura maSystem Strategies ichokwadi chinhu chekare? Isu tinonyatsoda chirongwa cheAgile Test?
mitambo yakaita dota yeandroid
Tenga iyo Galaxy S7 uye utore mahara Samsung Smart TV kubva kuAT & T (DIRECTV kunyorera kunodiwa)
Akanakisa Ekutengesa Zuva reVashandi pane mafoni, mahwendefa uye echokwadi asina waya nzeve
T-Mobile pakupedzisira inotanga kutengesa yazvino tsvina-yakachipa piritsi reAlcatel ine 4G LTE
Iyo yakanakisa (yakabhadharwa uye yemahara) yekurara yekutevera maapplication eApple Watch